विचार/ब्लग - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
यसभन्दा अघिल्लो भागमा अलङ्कारको परिचय दिँदै अनुप्रास शब्दालङ्कार अन्तर्गतको आद्यानुप्रास, मध्यानुप्रास तथा अन्त्यानुप्रासको बारेमा बताइसकिएको छ । यस भागमा शब्दालङ्कार अन्तर्गतका अन्य अनुप्रासहरु र थप अलङ्कारहरुको विषयमा संक्षिप्त जानकारी सहित
रोटरीको पुरस्कार घोषणा नै बिवादमा
अमेरिकामा होस वा नेपालमा, अचेल पुरस्कार, सम्मान र अभिनन्दन गर्ने परिपाटी आवश्यकता र योगदानका आधारमा नभएर ब्यापारको रुपमा बिस्तारित भैसकेको छ । कतिपय मानिसहरुले आफ्नो बद्मासी लुकाउन पनि आफ्नै खर्चमा
शाब्दिक वा अर्थगत कलाकारिताबाट भाषागत प्रस्तुतिलाई सिँगार्ने तत्त्वलाई अलङ्कार भनिन्छ । संस्कृतको ‘अलम्’ धातुमा ‘कार’ प्रत्यय लागेर ‘अलङ्कार’ शब्दको व्यूत्पत्ति भएको हो । ‘अलम्’ धातुको अर्थ हुन्छ ‘आभुषण’ । सामान्य
–डा. उत्तम खनाल (विश्लेषक) सत्य युगमा देवता र दानवको युद्ध भयो । देवताले दानवलाई कुनै जुक्ति गरे पनि युद्धबाट हराउन सकेनन् किनकी उनीहरु ज्यादै वलवान थिए । दानवलाई जितेर संसारबाट
काठमाडौं । भनिन्छ शिक्षा नै चेतनाको प्रथम मुहान हो साथै समाज बिकास र परिवर्तनको मुल आधार हो । विषयवस्तु उपर गहन बोध गर्ने,दृष्टिगोचर गर्ने आँखा हो । आम मानिसहरुलाई जिम्मेवार,
के ठाडी भाका गीत हो ? गाउन मिल्ने वा गाइएको भाषालाई गीत भनिन्छ । नेपाली वृहत शब्दकोषले गीतलाई गाउनको निम्ति रचिएको लयात्मक तथा सुललित पद्यरचना भनेर परिभाषित गरेको छ ।
जनताको साथ र सहयोगले मात्र कोरोना माहामारी पराजित हुनेछ
काठमाडौं । मित्र राष्ट्र चीनको वुहानमा सन् २०१९ को अन्त्यमा र नेपालमा सन् २०२० को प्रारम्भतिर देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि यसको प्रभाव
पूर्ण ओली / साहित्यकार “सर नमस्कार !”चिनेचिनेको स्वरले मेरो अकस्मात ध्यान खिँच्यो ।मैले अफिसको फाइल एकातिर पन्छाएर अभिवादन गर्नेको मुख हेरेँ । मेरो अगाडि अनुहारभरि लज्जाको गुलाबी रङ पोत्दै एकजना
गोपाल ढकाल विश्वव्यापीरुपमा नै जटिल समस्या बन्दै गएको छ आत्महत्या । यसको रोकथाम तथा जनचेतना अभिवृद्धिको उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर १० मा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइँदै आएको छ
कोरोना सगँ डराएर होइन, संघर्ष गरेर बाचौं
काठमाडौं । हामी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा पिल्सिएका छौं । यसकै कारण गत चैतको दोश्रो हप्तादेखि आजसम्म पनि विश्वका अन्य धेरै राष्ट्रहरूमा जस्तै हामी पनि स्वभाविक र सामान्य जीवनबाट